ပီတိ: November 2008
လက်ဆောင်ပေးတယ် ဆိုတာကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ဖော်ပြမှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုပြီး ကျွန်တော် လက်ဆောင် ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လျော့နည်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်မှာကျတော့ ပေးထားတဲ့လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေကို ပြန်ပေးလေ့ရှိကြတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ ခံယူချက်ကတော့လေ လက်ဆောင်ကိုပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင် လက်ခံလိုက်တဲ့သူက ပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ပေးတဲ့လူနဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာ ပိုင်ဆိုင်မှုအရ ဆက်နွယ်မှုမရှိတော့ပါဘူး။
အဲဒါကြောင့် ပေးထားတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မတောင်းတတ်သလို၊ ကိုယ်လက်ခံထားတဲ့ လက်ဆောင်တွေကိုလည်း ဘယ်တော့မှလည်း ပြန်ပေးလေ့မရှိပါဘူး။ အဲတော့ အဆင်မပြေရင် ပြန်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ တွက်ကိန်းနဲ့တော့ ကျွန်တော့်ကိုလက်ဆောင် မပေးလေနဲ့.. ဘယ်တော့မှ ပြန်မရဘူးမှတ် :P
ပေးထားတဲ့လက်ဆောင် ပြန်အပေးခံရပြီဆိုရင်လည်း စိတ်မကောင်းသလို… စိတ်လည်းဆိုးပါတယ်…. အဲလိုလုပ်တာက မရင့်ကျက်တဲ့ ကလေးအတွေးတွေပါ…
ပေးထားတဲ့ ပစ္စည်းကို သုံးလို့ရင်သုံးလိုက်ပေါ့… အဲလိုမှ မသုံးချင်ရင်လည်း သူများပေးပစ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး အမှိုက်ပုံးထဲ လွင့်ပစ်လိုက်ပါ။
အဲ… ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘူး ပြန်ပေးလိုက်ရမှ စိတ်ကျေနပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ပို့ခလေးတော့ အပြည့်အ၀ပေးပြီး ပို့ပါဗျာ...
အခုတော့ အထုပ်ပို့လိုက်တယ် လာယူပါဆိုလို့ ဖုန်းဆက်တာနဲ့ သွားယူတာ ၉ဒေါ်လာလည်း ပေးလိုက်ရသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ တွေ့လိုက်ရတာကတော့…
ပြန်ပို့လိုက်တဲ့သူရဲ့ မွေးနေ့အမှတ်တရ ကို ဖြစ်လို့… ပေးလိုက်ရတာ ၉ ဒေါ်လာ… ၉ ဒေါ်လာ :D
Posted by P.Ti at Monday, November 24, 2008 11 comments
အရင်တပတ်က သူမ ကို အပြင်သွားဖို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အင်္ကျီအပိုတစ်စုံလည်း ယူခဲ့ပါလို့ ခိုင်းလိုက်တယ်လေ…
သူမက တွေ့တော့… ဘယ်သွားမှာလဲတဲ့… ကျွန်တော်ကတော့ ဒီနားလေးတင်ပဲလို့ပြောပြီး သူ့ကို ဂရုမစိုက်အားပဲ နေရာလိုက်ရှာနေမိတယ်… သြော်… နေရာဆိုတာ နောက်ခံကောင်းတဲ့နေရာ.. ပြောရင်းရှုပ်ကုန်ပြီ… ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ နောက်ခံကောင်းတဲ့နေရာ… ဟုတ်ပြီနော်… တစ်မျိုးတွေးမိကုန်မှာစိုးလို့ပါ။
ဒီနေရာလေးမှာထိုင်ဆိုတော့ သူမက အတူတူထိုင်မှာလားတဲ့… ကျွန်တော်က မဟုတ်ဘူးလေ… ဓာတ်ပုံရိုက်မလို့ ဆိုလိုက်ရော… စိတ်ကောက်သွားပါလေရော…
နောက်တစ်ဖက်ကိုတောင် ဒီလို လှည့်သွားတယ်…
ချော့လိုက်တော့ နည်းနည်းတော့ စိတ်ဆိုးပြေသွားတယ်... ဒီဘက်ကို နည်းနည်းလေး ခိုးကြည့်လိုက်တယ်…
စိတ်ကောက်ပြေသွားတော့ သူမရဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်…
သူမကို လှတယ်လို့ပြောတော့ မြှောက်တာကလည်း လွန်းရောပဲဆိုပြီး ရီလိုက်တာ…
ဒီဖက်လှည့်ပါဦးဆိုတော့… သူမက ခပ်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်…
ကဲ… အ၀တ်သွားလဲတော့ လည်းဆိုရော… ရေသွားကူးမယ်မှတ်တာ လက်စသတ်တော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကိုး ဆိုပြီးတော့ မကြည်မလင်ဖြစ်နေပါတယ်။
သူမရဲ့ ဆံပင်လေးတွေကကောင်းတော့ ဆံပင်အသားပေးရိုက်ဖို့ ဆံပင်ကိုလှည့်ခိုင်းပြီးရိုက်လိုက်တာလေ…
ပြီးတော့ တရုတ် ၇ လပိုင်းကို ရောက်နေသလိုပဲလဲဆိုတော့ …. ဘယ်လုပ်ပြတယ်မှတ်လဲ…
Posted by P.Ti at Saturday, November 08, 2008 18 comments
အဲ… ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြီး ဘာတွေလဲလို့တွေးနေဦးမယ်နော်။ လက်ကျန် ဆား ကို ထပ်ချက်လိုက်ပါတယ်။ အဟဲ….
ကျွန်တော် ရေးထားတာတွေကို ဖတ်ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် ငယ်စဉ်က အဖြစ်အပျက်တွေကို သတိရမိလာတဲ့ မေမေက စာရေးပြီး ပို့ထားတာလေးပါ။
မိဘဆိုတော့လည်း ကိုယ့်သားသမီးတွေရဲ့ ငယ်စဉ်က အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို သတိရပြီး ပြန်ပြောနေလေ့ရှိပါတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာအားဖြင့် တခြားလူတွေအတွက် သိပ်ပြီးတော့ မထူးဆန်းလှပေမယ့် မိဘတစ်ယောက်က သားသမီးတွေကို သတိရလို့ရေးထားတာမို့ အမှတ်တရအဖြစ် တင်လိုက်ပါတယ်။
မေမေရေးပေးထားတာတော့ ကြာပါပြီ၊ အရင်ရေးထားတာတွေနဲ့ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေရင် ငြီးငွေ့သွားမှာစိုးလို့ နည်းနည်းကြာတော့မှ တင်လိုက်တာပါ။
သက်စေ့ ရည်းစားရှိတယ်ဆိုတဲ့ သားငယ်ဟာ အမေ့ကျောင်းမှ ပျော်နေပါပြီ။ အမေစာသင်ချိန်မှာ ဆရာများနားနေခန်း (Common Room) ထဲမှာ အားချိန်ရတဲ့ ဆရာမတွေ နဲ့ စကားလက်ဆုံ ကျနေလေ့ရှိပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းစစ်စရာ၊ စာဖတ်စရာတွေရှိတဲ့အခါမှာတော့ သားငယ်ကို စာရွက်နဲ့ ခဲတံပေးပြီး ပုံဆွဲနေနော်လို့ ဆရာမတွေက ခိုင်းထားတတ်ပါတယ်။
သားငယ်က သူမြင်တွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ ဆီဘောက်ဆာကားကြီးပုံတို့၊ လော်ရီကားကြီးပုံတို့ကို ဆွဲနေလေ့ရှိပါတယ်။
သားငယ်က ကားဆိုရင်လည်း အကြီးကြီးကိုကြိုက်ပါတယ်။
ချောက်မြို့ အရှေ့ဘက်၊ မြို့နဲ့ အတန်ဝေးတဲ့ ဂဲကြီးကုန်းမှာ နေရတဲ့ ဗျူဟာစစ်တပ်က ဆရာမငြိမ်းဆိုရင် စစ်လောရီကားကြီးနဲ့ ကျောင်းတက်ရပါတယ်။ ဆရာမကားနဲ့ ကားကြုံလိုက်တဲ့အချိန် ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေဟာ လောရီကားကြီးအပြည့်ပါပဲ။
ဂဲကြီးကုန်းကနေ မြို့မြောက်ဖျားသို့ ဆင်းတဲ့လမ်းဘေးမှာ ကျွန်မတို့အိမ်ရှိတာဆိုတော့ တခါတလေ ကျွန်မတို့ သားမိတတွေ ငြိမ်း ရဲ့ကားကြီး အကြုံလိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းက မြို့ရဲ့တောင်ဘက်၊ တမာအိုင့်ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိပါတယ်။ ကျောင်းတောင်ဘက်မှာ အဲဒီတုန်းက ဘာမှမရှိပါဘူး။ ယခုတော့ ကျောင်းက မြို့လယ်ဖြစ်နေပါပြီ။
ငြိမ်းက ရှိတဲ့ကားနဲ့ ကျောင်းကိုရောက်အောင်သာ လာခဲ့ရပေမယ့် စိတ်ညစ်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်ရတဲ့ အကြောင်းက၊ ကားကြုံလိုက်သူတွေက ကားကြီးသလောက် အပြည့်ပါတာဆိုတော့ အိမ်နဲ့ကျောင်း၊ ကျောင်းနဲ့အိမ် အသွား အပြန်ခရီးကို ချောက်မြို့ကို အလျားလိုက် ဖြတ်သန်းသွားရပါတယ်။ မြို့ထဲ စည်ကားတဲ့နေရာ ဖြတ်သန်းရ၊ ကားရပ်ရဆိုတော့ သဲထိပ်ရင်ဖို ဖြစ်ရတာများတယ်ဆိုပဲ။
အကယ်၍ကားကြုံစီးသူများ မပါဘူးဆိုရင်တော့ ဂဲကြီးကုန်းနဲ့ အ.ထ.က (၁) ကို မြို့ထဲက မဖြတ်ပဲ တောလမ်းခရီးက ကုန်းတက်ကုန်းဆင်းသွားလို့ရတာကိုး။
အဲဒါကလည်း လမ်းရှင်းပေမယ် လမ်းအကွေ့အကောက်၊ ကုန်းတက်၊ ကုန်းဆင်း များတော့ ရင်တဖိုဖို၊ အသဲတအေးအေး ဖြစ်ရတာပဲတဲ့။ ကားငယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို မခံစားရတန်ဘူးလို့ ငြိမ်း က တွေးမိထင်ပါရဲ့။
“ဒေါ်လေးငြိမ်းကားကြီးက သိပ်ကောင်းတာပဲနော်၊ အကြီးကြီး အကြီးကြီး” နဲ့ သားငယ်က အားကျသံနဲ့ ပြောလို့မဆုံးရှိတတ်တယ်။
“သားငယ် ပြောတာနဲ့၊ ငါလည်း ကားကြီးကြီးစီးရလို့ စိတ်ညစ်တာတွေ ပျောက်သွားပြီဟဲ့…” လို့ ငြိမ်း က ပြန်ပြောလေတယ်။
တစ်ခါတုန်းက ရှေ့တန်းပြန်ရဲဘော်တွေကို သွားကြိုရပါတယ်။ လက်နက်ကြီး ကိုင်တောင်တဲ့ ရဲဘော်တွေကို အားကျခဲ့ဘူးတယ်။
“အဲဒါ ဘယ်သူတွေလဲ…” လို့ သားငယ်က မေးတယ်။
“ဟိုးး သေနတ်ငယ်ငယ်လေးကိုင် ထားတာကရော…”
“ဒါဆို သားကြီးရင် စစ်သားကြီးလုပ်မယ်…” တဲ့
အဲလောက်ကြီးကြီးကြိုက်တဲ့သားငယ် အခုကြီးတော့ မိန်းမကြီးကြီးတော့ မယူတန်ကောင်းပါဘူးနော်… (မေမေပြောတာ… အသက်နော် အသက်…)
သင်ခန်းစာ အသစ်မသင်ရပဲ။ စာမေးတဲ့နေ့တွေမှာဆို ကျွန်မ သားငယ်ကို စာသင်ခန်းထဲခေါ်သွားပါတယ်။ ကျွန်မက ၉တန်း ရူပဗေဒသင်ရပါတယ်။ အရွေ့၊ အကွာအဝေး၊ အလျင်၊ အရှိန် တို့ကို ကွဲပြားအောင် ဥာဏ်စမ်း ပုစ္ဆာလေးတွေ ဆင်ပြီး မေးတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ - မောင်မြဟာ သူ့အိမ်ရဲ့ အရှေ့ဖက် မီတာ ၁၀၀ ဝေးတဲ့ကျောင်းကို လမ်းလျှောက်သွားတယ်၊ ကျောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာ သူဘယ်လောက် ရွေ့ခဲ့ပြီလဲ။ ကွာအဝေးဘယ်လောက်လဲ…
အဲဒီ ပုစ္ဆာကို နောက်တစ်ခန်းမှာ အိမ်ရဲ့ အနောက်ဖက်လို့ ပြောမိရင်၊ သားငယ်က “မေမေ… အရှေ့ဘက်လေ… အရှေ့ဖက်…” လို့ ပြင်ပေးပါတယ်။
အကွာအဝေးကို ကိုက်၂၀၀ လို့ပြောလိုက်မိရင် “မီတာ ၁၀၀ ပါ.. မေမေကလည်း…” ပြင်ပေးပါတယ်။
“မေမေကလည်း… မှား မှား နေတာပဲ..” လို့လည်း ထပ်ဆင့်ပြောပါသေးတယ်။
အလျင်၊ အရှိန် တို့ရဲ့ ယူနစ်ကို ကျောင်းသားတွေကို မေးတဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေက မဖြေနိုင်သေးခင် သားငယ်က ထောက်ပေးပါတယ်။
အရှိန် ရဲ့ ယူနစ်က ဖိပါစက္ကန့်စကွဲယား…
အလျင်ရဲ့ ယူနစ်က ဖိပါစက္ကန့် လို့ဖြေပါတယ်။
ယူနစ်တွေကို CGS, FPS System မှန်အောင် ပြောနိုင်ပါတယ်။
အမေက တစ်နေ့ ၆ ခန်းဝင်ရတာကိုး။ နေ့စဉ် အခါများစွာ အထပ်ထပ်ကြားနေရတော့လည်း မှတ်မိနေတာပေါ့။
ဥာဏ်ရည်ကောင်းတာကိုတော့ ၀မ်းသာမိပါပေမယ့်၊ လူကြီးတွေနဲ့ပေါင်း၊ စာကြီးတွေမှတ်နဲ့ အရွယ်နဲ့မလိုက်ဖက်တာတွေ တွေ့ကြုံရ၊ ကြားသိရ မှတ်နေရတာကိုတော့ ဂရုဏာသက်ခဲ့မိပါတယ်။
ကလေးဘ၀ အရွယ်တူတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ ရွှင်ရွှင်မြူးမြူး ကြည်နူးစွာ ဖြတ်သန်းစေချင်ပါဘိတော့တယ်။
၁၄၊ ၈၊ ၂၀၀၈
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန် ။ ။ ရည်းစား သက်စေ့ သားမှာရှိတယ်
Posted by P.Ti at Thursday, November 06, 20086comments
နေနေနိုင့်ဘလော့က မောင်ကြည်မွန်ရေးတဲ့ ဘာရောင်းပါသလဲ... ကဗျာကိုဖတ်ပြီး ရေးပါသည်။
Posted by P.Ti at Wednesday, November 05, 20087comments
Posted by P.Ti at Tuesday, November 04, 2008 15 comments
ဒီနေ့မနက်က စင်ကာပူထုတ် သတင်းစာ the new paper ကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ BIG WALK on water လို့ခေါ်တဲ့ လမ်းလျှောက်ပွဲကို ၀င်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်း ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ မှတ်တမ်းအဖြစ်တင်လိုက်တာပါ...
မနက်စောစောထ အစောဆုံးရထားကိုစီး စုရပ်ဖြစ်တဲ့ SunTec City ကိုချီတက်ခဲ့ပါတယ်...
ရောက်တော့ လူတွေတော်တော်များများတောင် ရောက်နေပါပြီ...
လမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့အသင့်ပြင် အားလုံးလက်တွေ လေထဲမြှောက်ထားလိုက်...
အချက်ပေးလို့ညာသံအော် ထွက်လာပါပြီ လမ်းလျှောက် လမ်းလျှောက်...
Golden Mile ကိုမြင်ပြီလေ...
ဖျက်မယ်တကဲကဲနဲ့ အားကစားကွင်း ကိုရောက်...
မိုးလုံလေလုံ အားကစားရုံကိုကျော် ဒီတံတားကိုဖြတ်ပြီနော်...
အိပ်ယာထရမှာပျင်းတဲ့ကျွန်တော် Tanjong Rhu နားကနေ Kallang River ဘေးက မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ ရှုခင်းတွေကို ဒီလိုဒီလို အားရပါးရကြည့်...
ရဲတွေကလည်း ကူညီကာ လမ်းရှင်း...
ခဏလျှောက်တော့ Marina Bay Golf Course ဘေးကတောလမ်းလေးကိုရောက်...
တောပန်းလေးကို လှလှ ရိုက်...
ဂေါက်ကွင်းဘေးကနေလျှောက်ပြီး မကြာခင်မှာတော့ ကောင်ကင်ပြာပြာအောက်က Singapore Skyline ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်...
လူတွေက ဟိုမှာဟိုမှာ ပြောသံကြာရာ ကြည့်လိုက်တော့ ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ Marina Barrage ကို အဝေးကနေ တွေ့လိုက်ရပါပြီ
Marina Bay ကိုလည်း ပြန်မြင်နေရပြီ...
တစ်ဖက်ကိုကြည့်တော့ သင်္ဘောတွေအများကြီးရှိတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီး (မြင်ကတဲ့ သံတန်းကြီးကတော့ barrage ကို သင်္ဘောတွေတိုက်မိမယ့် အန္တရယ်ကနေ ကာကွယ်ထားတာပါတဲ့...)
ပန်းတိုင်နား ကြယ်ပွင့်တွေမှုတ်ထုတ်နေတဲ့နေရာမှာ ကြိုးစားပြီး ခူးဆွတ်နေကြပါတယ်... မမီတဲ့ကြယ် လက်နဲ့ရွယ်နေတာပေါ့...
ပန်းတိုင်ကို အပြေး ရောက်လို့လာ...
ဟောဒီမှာတော့ အလကားပေးနေ... (ကူပွန်တော့ပါရတယ်နော်...)
ပန်းတိုင်ကိုတော့ ၀င်လာမစဲ တသဲသဲနဲ့...
ပြန်ရဖိုအရေး တန်းစီပေ... အရမ်းကြာသလေ...
ပြန်ရောက်တော့ သူကမေး... ငါ့အတွက် ဘာပါသလဲတဲ့...
Marina Barrage အကြောင်းကိုတော့ ဒီကိုလာ က ဒီမှာ အသေးစိတ် ရေးထားပါတယ်။
Posted by P.Ti at Sunday, November 02, 20084comments